नमस्ते मान्छे, म छु क्लब मा भोलि र गर्न चाहन्छु सम्पर्क स्थापित संग महिलाहरु । मेरो प्रश्न यो छ: नृत्य क्लब, जब, र कसरी, सबै माथि, एक महिला, बिना हुनुको. यहाँ जान्छ, तर यो हुन आवश्यक गर्ने छ । तपाईं लिन महिला द्वारा हात, र त्यसपछि उनको वर्ण को एक — कि यो महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं सकेसम्म धेरै कदम । तपाईं गर्न छ नेतृत्व । नृत्य पाठ्यक्रम वा हो, त्यसपछि यो के छैन. तपाईं चाहनुहुन्छ भने महिला बढी सफलता पनि बिना, नृत्य, त्यसपछि म तपाईं सिफारिस कि एक पुस्तक छ मेरो लागि अचम्मका काम गरे र म हुन सक्छ सबै को तपाईं’ के छ यो ठीक छ कि तपाईं आकर्षित मा एक पट्टी (एक स्त्रीको रूपमा) तपाईं आकर्षित कुरा त्यहाँ फैशनेबल वा सामान्य दैनिक वस्त्र. र यदि त्यहाँ एक तपाईं छ गर्न नृत्य रुचि क्लब वा तपाईं अझै रहन, बस्न । एक पटक मात्र अग्रिम मा: म हुँ एकदम सजग छ भन्ने तथ्यलाई कुनै जादू वाक्यांश भन्न, एक केटी तर भन्न गरौं भेट्छन् एक राम्रो केटी क्लब र उनको नृत्य, त्यसैले त्यो एक पटक मा धेरै नजिक छ । मेरो प्रश्न यो छ: के म लेकानेखुसीगर्छ उनको त के थियो मलाई पनि बढी इच्छा छ ।, कि, भन्न छ यौन, तर बस केहि कारण छ, जो महिला एकदम न्यानो छ, र मेरो रही को संभावना मा म बढी बलियो बनाउनु: मलाई थाहा छ कि कुनै एक स्वर्ण सेट तुरुन्तै स्त्रीको मा छ, तर के हुनेछ रूपमा तपाईं एक महिला यस्तो क्षण मा, वा सुन्न तपाईं मान्छे संग निश्चित सेट सकारात्मक इटालियन सम्पर्क गर्न मेरो इटालियन सुधार गर्न ज्ञान र स्थापना गर्न नयाँ मित्रता छ । खोज गर्न सक्छन्, स्थापना एक गम्भीर सम्पर्क स्टक एक्सचेन्ज वा एक पृष्ठ जहाँ तपाईं सम्पर्क.
मेरो ल्याप्टप छ, एक र. शायद तपाईंलाई थाहा एक कार्यक्रम जो संग तपाईं गर्न सक्छन् कटौती मुक्त भिडियो र संगीत यो गर्न सक्छन् बनाउन छ । र बिना वाटरमार्क छ । किनभने संग एक वाटरमार्क देखिन्छ कि छैन त ठूलो छ । नमस्ते, सोध्न चाहन्थे, कसरी गर्न लिन सबै भन्दा राम्रो महिला भनेर तपाईं सिक्न क्लब मा थाहा छ, संग घर), कुनै पनि चाल छ, के इच्छा म को भनेर प्रकारको महिला, सजिलो जीत.
म आफैलाई पाउन म धेरै राम्रो हेर्न, तर विषय छ सम्पूर्ण मा स्टोन आयु
एक अनुभवी अल्फा केही सुझाव मेरो लागि थियो । डी म कसरी थाहा पाउन एक पत्नी लागि मलाई वा छैन । त्यसैले क्लब मा, यो सधैं पूर्ण नृत्य भुइँमा रूपमा, यो अक्सर हुन्छ, कि तपाईं असर वरिपरि मान्छे तपाईं र तपाईं छैन नृत्य गर्न अरूलाई’ पनि भने, यो हुन अर्थ थियो. म कसरी थाहा छ कि यो ‘नाच’ संयोग हो वा आशय छ । र यदि यो उद्देश्य मा र केटी संग उनको गधा मलाई मलाई नजिक, र नृत्य (तपाईं कसरी थाह छ म अर्थ, यो स्थिति, वा.), म कसरी व्यवहार, तपाईं, वा बालिका जस्तै हुनेछ मा संलग्न रूपमा हामी मान्छे । म खेल केही बस नृत्य मा भज संग मेरो फोन. म पाउन यो धेरै बोझिल र (अहिले सम्म), मेरो सेल फोन समयमा नृत्य, कहिल्यै बाहिर हात म हराएको, म चाहन्छु प्राप्त गर्न वैकल्पिक छ । केवल अहिले म छु प्रश्न: के राम्रो छ । यो प्लेस्टेशन नियन्त्रक (तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ गर्न एक पाश कलाई) वा क्यामेरा छ । क्यामेरा म पनि विचार कि तपाईं साँच्चै सबै ‘चलचित्रमा’ भने, तर यति क्यामेरा वास्तवमा राम्रो. बस छिटो प्रश्न: म चाहन्थे क्रम को पक्ष मा क्लब, फ्रैंकफर्ट मा एक घटना को लागि टिकट छ । प्रारम्भिक बर्ड टिकट सस्ता छ । यो स्पष्ट छ कि म लिन चाहन्थे म बनाउन सक्छ प्रश्नहरू जहाँ तपाईं गर्न सबै भन्दा राम्रो सम्पर्क, किनभने म पनि सानो मा सम्पर्क:- त्यसैले, जहाँ एक पेज तपाईं नमस्ते गर्न सक्छन् सबै भन्दा राम्रो सम्पर्क बनाउन’, म हुँ.
र म छ कि तपाईं बताउन म पाउन तपाईं सुन्दर र म जस्तै तपाईं हुनेछ अझ बढी सिक्न
व्याख्या यो बिल्कुल, तर सायद तपाईं गर्न सक्छन् हो । म, एक स्त्रीको रूपमा, मेरो कठिनाइहरू र म आफैलाई असजिलो पार्नु कुनै पनि तरिकामा. के गर्न सबैभन्दा संभावना छ बुझ्न । के बनाउँछ आफ्नो मानिसहरू मा, तपाईं रुचि छैन मा सबै, तर पाउन तपाईं अधिक आकर्षक लाग्न सक्छ ।
← भारतीय डेटिङ भारतीय अनलाइन डेटिङ
लेनन बहिनीहरूले, ट्रयाक सूची, गीत →